Xisbiyada mucaaradka ah oo Muuse Biixi ku eedeeyay fashilka shir looga hadlayay doorashada. - Jowhar somali news leader
Xisbiyada mucaaradka ah oo Muuse Biixi ku eedeeyay fashilka shir looga hadlayay doorashada.
By Master	 On May 25, 2022
May 25 (Jowhar.com)-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya waxyaababa sababta u ahaa fashilka ku yimid shir balaaran oo xalay magaalada Hargeysa ay ku yeesheen mas’uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah ee WADANI iyo UCID iyo xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Dhinaca mucaaradka waxaa kulanka xubnaha uga qeybgalay hoggaamibayay C/raxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe, halka dhanka Kulmiye uu hormuud u ahaa xubnaha ka socday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyadoo sababta natiijo la’aanta shirka dusha looga tuuray madaxweynaha Somaliland.
Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Muuse Biixi aanu diyaar u eheyn in 13-ka November uu qabto doorasho, isagoo sheegay inuu diyaarsanayo guddi doorasho oo u fara gelisa doorashada lagu balamay dhamaadka sanasan.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna tilmaamay in Shan qodob oo ay hordhigeen madaxweynaha aanu midna ka aqbalin, taasoo uu ku micneeyay inaanu u socon qabashada doorasho, wuxuuna ka digay dhibaato ka dhalata mudo kororsi la sameysto.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka hadlay wararka sheegaya in loo magacaabay Xilka taliyaha NISA